Bowflex 4th yaChikunguru Promo Makodhi
Bowflex ine 2 yakanaka Chikunguru 4 2014 Treadclimbers kukwidziridzwa kuri kuuya!
1. $ 300 YEMAHARA + Yemahara Bowflex Inosimudzira + YEMAHARA Kutumira pane iyo TreadClimber TC20
Iyi Bowflex 4th yaJuly kukwidziridzwa inoshanda kubva muna Chikunguru 1 - 5 2014. Unofanira kushandisa promo kodhi FIREWORKS pa checkout kuti uwane rubatsiro rwako rweTreadclimber.
* Aya Bowflex 4th yaJuly kukwidziridzwa anoshanda kubva Chikunguru 1st 2014 - Chikunguru 5th 2014. Rangarira kushandisa promo kodhi FIREWORKS pakubuda. Chero chero mutengo uye ruzivo rwekuwanika rwunoratidzwa paTreadclimber.com panguva yekutenga ichashanda kune yako odha
Kana iwe wakanonoka kune Bowflex 4th yaJuly kukwidziridzwa, kune imwezve Bowflex Treadclimber promo kodhi iyo iwe yaunogona kushandisa. YeTreadclimber TC20, unogona kuwana $ 300 YEMAHARA & YEMAHARA Kutumira. YeTreadclimber TC10, unogona kuwana $ 200 OFF uye ubhadhare $ 20 Kutumira. Kune chimwe cheizvi zvipo, unogona kushandisa promo kodhi SUMMER. Iyi kodhi yekusimudzira yezhizha inoshanda kubva muna Chikunguru 1 2014 - Nyamavhuvhu 15 2014.
$ 300 YEMAHARA + YEMAHARA Kutumira pane iyo TreadClimber TC20, $ 200 OFF + $ 20 Kutumira pane iyo TC10 pa Bowflex.com! Shandisa promo kodhi: SUMMER (Inobvumirwa Chikunguru 1 - Nyamavhuvhu 15)